Ngaba uyawazi umahluko phakathi kwekhabhoni nefayibha yeglasi? Kwaye uyazi ukuba omnye ubhetele kunomnye?
I-fiberglass ngokuqinisekileyo indala kwezi zinto zimbini. Yenziwe ngokunyibilikisa iglasi kwaye uyikhuphele phantsi koxinzelelo oluphezulu, emva koko udibanise imitya yezinto kunye ne-epoxy resin ukwenza into eyaziwa ngokuba yiplastikhi eyomeleziweyo yeplastiki (i-FRP).
Ifayibha yeCarbon ineeathom zekhabhon eziboshwe kunye kumatyathanga amade. Amawakawaka emicu edityanisiwe emva koko adityaniswa ukwenza i-tow (imisonto yeefayibha ehlanganisiweyo). Ezi thawuli zinokudityaniswa kunye ukwenza ilaphu okanye ukusasaza tyaba ukwenza izinto "ezingadibananga". Kule nqanaba, kudityaniswe nentlaka ye-epoxy ukwenza yonke into ukusuka kwimibhobho kunye neepleyiti ezithe tyaba ukuya kwiimoto zobuhlanga kunye neesathelayithi.
Kuyathakazelisa ukuqaphela ukuba i-fiberglass eluhlaza kunye nekhabhoni fiber zibonisa iimpawu ezifanayo zokuphatha kwaye zinokujongeka ngokufanayo ukuba une-fiberglass emnyama-edayiweyo. Kuze kube semva kokuqamba ukuba uqale ubone ukuba yintoni eyahlula ezi zinto zimbini: ezomeleleyo, ukuqina kunye nobunzima obuncinci (i-carbon fiber ilula kancinci kuneglasi yefayibha). Malunga nokuba enye ibhetele kunenye, impendulo ithi 'hayi'. Zombini ezi zinto zinobuchule kunye nobubi kuxhomekeke kwisicelo.
I-fiberglass ithambekele ekubeni ibe bhetyebhetye kune-carbon fiber kwaye imalunga ne-15x ngexabiso eliphantsi. Kwizicelo ezingadingi ukuqina okuphezulu- njengeetanki zokugcina, ukwambathisa isakhiwo, iminqwazi yokukhusela, kunye neepaneli zomzimba- iglasi yefayibha yinto ekhethiweyo. I-fiberglass ikwasetyenziswa rhoqo kwizicelo zevolumu ephezulu apho ixabiso eliphantsi leyunithi yinto ephambili.
Ifayibha yeCarbon ikhanya ngokwenyani ngokubhekisele kumandla ayo aqine. Njengoko ifayibha eluhlaza yomelele kancinci kune-fiberglass, kodwa yomelela ngokumangalisayo xa idityaniswe ne-epoxy resins. Ngapha koko, ifayibha yekhabhoni yomelele kunezinyithi ezininzi xa zenziwe ngendlela eyiyo. Yiyo loo nto abavelisi bayo yonke into ukusuka kwiinqwelomoya ukuya kwizikhephe besamkela i-carbon fiber ngaphezulu kwesinyithi kunye ne-fiberglass ezizezinye. Ifayibha yeCarbon ivumela ukomelela okukhulu kubunzima obusezantsi.
Apho ukuzinza kuchazwa 'njengokuqina', iglasi yefayibha iphuma ngaphandle okuphumeleleyo. Nangona zonke izinto ze-thermoplastic zinobunzima obulinganayo, amandla e-fiberglass okumelana nezohlwayo ezinkulu inxulumene ngqo nokuguquguquka kwawo. I-Carbon fiber ngokuqinisekileyo iqinile kune-fiberglass, kodwa oko kuqinisela kukwathetha ukuba ayomelele.
Iimarike zombini i-carbon fiber kunye ne-fiberglass tubing kunye namashiti akhule ngokuqatha kule minyaka idlulileyo. Ngale nto ithethwayo, izixhobo ze-fiberglass zisetyenziswa kuluhlu olubanzi kakhulu lwezicelo, isiphumo kukuba i-fiberglass eninzi yenziwa kwaye amaxabiso asezantsi.
Ukongeza kulomahluko wamaxabiso kuyinyani yokuba ukuvelisa iifayibha zekhabhoni yinkqubo enzima kunye nexesha. Ngokwahlukileyo, ukuphuma kweglasi enyibilikileyo ukwenza i-fiberglass kulula ngokufanayo. Njengayo nayiphi na enye into, eyona nkqubo inzima iya ibiza kakhulu.
Ekupheleni kosuku, i-fiberglass tubing ayisiba ngcono okanye imbi ngakumbi kunenye indlela ye-carbon fiber. Zombini ezi mveliso zinezicelo zazo ezigqwesileyo, konke malunga nokufumana izinto ezifanelekileyo kwiimfuno zakho.